Iskahorimaad ka dhacay kulankii Trump. - BBC News Somali
Iskahorimaad ka dhacay kulankii Trump.
28 Maajo 2016
Taageerayaasha iyo mucaaradka musharaxa xisbiga jamhuuriga Mareykanka, Donald Trump, ayaa iskahorimaad ku dhexmaray magaalada San Diego ee California.
Booliska, ayaa ku sheegay in isu soo baxa lagu qabtay dibadda dhismaha hoolka bartamaha magaalada uu qeynuunka ka horjeedo iyagoo xiray 35 ruux, waxayna dadka tuurayeen dhagxaan iyo dhalooyinka biyaha.
Tiro booliska rabshadaha, ayaa la keenay si ay u kala dhexgalaan dadka. Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha, ayaa fuulay darbiga xarunta si ay ugu tuuraan booliska dhalooyinka biyaha.
Turmp, ayaa ku sugnaa magaalada ku dhow xadka Mexico si uu u qabto isu soo bax ka hor 7-da June tartanka doorashada California. Wuxuu ballanqaaday inuu darbi ka dhisayo xuduudda si loo celiyo muhaajriinta.
Dadweynaha San Diego, ayaa hal meelood 3 ka soo jeeda Latino, iyadoo boqolaal kun ay maalin kasta si sharci ah uga soo gudbaan xadka Mexico.
Mid ka mid ah dibadbaxayaasha San Diego, Martha McPhail, ayaa wargeys gudaha u sheegay inuu ka horjeedo luuqadda naceybka iyo takoorka leh ee Donald Trump iyo qabweynaantiisa iyo dulqaad la'aantiisa. Balse taa waxaa difaacay Rily Hansen oo taageerayaasha Trump ka tirsan, isagoo sheegay in aabihii u sheegi jiray in nin ganacsade ah loo baahan yahay inuu madaxweyne noqodo, uuna jecel yahay siyaasadihiisa.